Sidee Si aad u qorshayso Trip A Si Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Sidee Si aad u qorshayso Trip A Si Europe
Marka aad qorshaynayso safarka Europe, aad wajahay fursado aad u badan! meelaha aan dhammaadka lahayn iyo waayo-aragnimada, inaad safri karto sanado oo aad wali dareento inaad seegtay wax muhiim ah. Tani waxay horseedi kartaa sameynta khaladaadka safarka xad-dhaaf ah, oo seegay faahfaahin yar in loo sameeyo safarka iyo safarka tareenka si sixir. Waxaan halkaan u joognaa in aan kuu sheego waxa aan waa in aad samayn iyo Sidee si ay u qorsheeyaan safar in Europe, ka bilow ilaa iyo dhamaad!
tip 1: Ururi Waxaa Down
Ka hor inta aadan la kulmi karaan Tapas Spanish dhab ah, piazzas ee Rome, ama dabaqyada dusha sare magaalada Prague, qayb muhiim ah oo loo baahan yahay admin! Si fudud u gelin, ayaa in ka badan diyaariyey aad tahay marka aad qorshaynayso safarka Europe, fursadaha weyn aad oo xiiso leh iyo safar stress-free in kor ku nool in aad ka filayso.
Sidaas halkan waa a Tilmaanta Tareenka Save A: dooran shan top, waa-dos tacabur in Yurub! Waxaa laga yaabaa in uu cabo ee Hofbrauhaus in Munich, ama qaadashada safar kanaalka in a Amsterdam, ama baadhaya David-ka xaglo badan – in Florence. Wax kasta oo ay tahay, calaamadee kuwa hoos iyo qorsheeyo aad safar ku wareegsan. Doorbidaa by tareenada.
Tigidhada Tareenka ee Prague
Tikidhada tareenka ee Frankfurt
tip 2: Ha ka fogaadaan beeley ah.
Hadda oo aan ogaanay in aad u baahan tahay si ay u qorsheeyaan safar in Europe, soo socda waxaa dooranaya dalal aad top. In ruuxa YOLO, laga yaabaa in aad rabto in aad iska track tuman oo raadi GEMS qarsoon magaalooyinka gudahooda. Laakiin hipster aad ee doonaya inay tagaan dhanka ah meelaha caadiga ah, Waxaa laga yaabaa in ay qaataan kursi. On baska dalxiis. Waxaa jira sabab sababta meelaha sida Colosseum The, Eiffel Tower ah, iyo Charles Bridge are all mid aad u caan ah iyadoo dalxiisayaal: ay tahay mid laga cabsado! Ha dareemin inaad u baahan tahay inaad hesho ka bax wadada la garaacay aawadood. Haddii weyn ee soo jiidashada racfaan aad si, markaas iska tag oo aad aragtaan.
Waxaa saas la mid, ma daweeyo tilmaame sida injiilka. Waxaa la odhan kara Louvre waa waadaxa ah waa-samayn on a safarka ay Paris, but maybe you’d have a better day searching for Blek le Rat pieces on alley walls. dabacsanaanta, marka aad u safarto, waa furaha, had iyo jeer!
London si Tareenadu Frankfurt
Tikidhada Tikidhada ee London iyo Cologne Tareenka
Tikidhada Tartanada London iyo Brussels
Safarka ee xilli off. bilood Popular yihiin July, August, iyo September. Waxay insanely mashquul yihiin, in aan ku xuso qaali! Haddii aad u qorsheeyaan safar Yurub ee Summer, aad doonaa in la wadaago waayo aragnimo kasta malaayiin iyo malaayiin saaxiibo aad ugu dhow. Hoyga waxaa la dalban doona, ama qaali ah oo Tareenadu noqon doonaa inta ka badan buuxa, maxaa yeelay, iyagu waa sida ugu fiican ee ay u safraan!
tip 4: Isku soo wada duub dukumiintiyadaada safarka iyadoo qayb ka ah qorshaha safarka Yurub
Haddii aadan haysan baasaboor, ka dibna aad u fiican ka heli arrinkaas! Waxay qaadan doontaa ugu yaraan afar ilaa lix toddobaad laga bilaabo wakhtiga codsiga si aad u hesho mid ka mid ah. (Iyada oo ku xidhan waxa dalka aad ku nooshahay dabcan) adeegyada dedejiyey dedejin kartaa habka, laakiin waxa aad ku kici doona. Waxaa fiican in ay is ogow of this si fiican ka hor ka hor inta aad safarka. Horeba leeyihiin baasaboor? Hubi taariikhda uu dhacayo ay! Qaar ka mid ah dalalka diidi kartaa in aad soo galo haddii uu ka dhacayo gudahood 6 bilood marka aad timaado. Eek!
tip 5: Kiraysiga baabuur,.
oo raba in jeexjeexay baabuur marka aad qorshaynayso safarka Europe? U hubso in aad haysato laysanka darawalka oo ansax ah. Shirkadaha baabuurta kireeya qaarkood waxay u baahan yihiin in ay dadka safarka ah ka haysato laysanka darawalka caalami ah ee intaa dheer in liisanka darawalnimada ay ka dalkooda hooyo.
Strasbourg ilaa tikidhada tareenka Paris
tip 6: Ha ka badan-santuuq aad faahfaahin la dalal aad u badan.
Sida ku xusan ka hor, way fududahay in si xad dhaaf ah loo sameeyo oo la isku dayo in wax badan la tuujiyo. Waa gebi ahaanba la fahmi karo. fasaxa qaali aad u baahan tahay in si fiican looga faa'iideysan, sidaas darteed waa u fududahay in ay isku dayaan in ka badan-santuuq itineraries marka uu qorsheynayay safar uu in Europe. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay noqon kartaa qaali (in aan ku xuso daal), sida badan-xirxiraan safarada la dalal aad u badan in aad dhowr maalmood keenaysaa in waqti dheeraad ah oo ay marti ahaayeen, iyo gaaska ama ka badan tigidhada tareenka. Xaaladaha xad-dhaaf ah, waxaa lagu arbushayo kartaa safar, waxaa galay isku dari kara ka mid ah hotel jeeg-tago iyo hubi dheceen (la xirxirida joogto ah iyo unpacking), halka daawashada tartanka ah marna-booqday muuqaalka ee la soo dhaafay daaqadaha tareenka. Haddii ay suurtagal tahay, hoos. Waxaad arki doonaa badbaadin gaadiidka oo ay helaan waqti dheeraad ah si ay u sahamiyaan meelaha aad.
Brussels ilaa tikidhada Tareenka Rotterdam
Antwerp tigidhada tareenka Rotterdam
Tikidhada Tikidhada Tareenka Rotterdam
Paris ilaa tikidhada Tareenka Rotterdam
Socotada lacag badan iibsiga euros baabba 'ka bangi (ama ka xun weli, ka ah counter sarrifka lacagta) ka hor imaanaya in Europe. Tani waxa ay keentey in khidmadaha culus! so don’t neglect this subject when you plan a trip to Europe.
Taladayadu waxay tahay in madax isla markiiba si ATM marka aad timaado Yurub iyo ka baxaan lacag caddaan ah oo isticmaalaya kaadhka ATM aad. Waa wax iska fudud, iyo sarrifka in aad hesho xawilaada waa hubaal ka wanaagsan yahay heerka wax xataa innagu waan helay bangiyada guriga. Wac bangiga ka hor inta aadan ka tegin si aad u weydiiso oo ku saabsan kharashka caalamiga macaamil ATM, iyo sidoo kale ka warrami in aad isticmaalayso kaarka dibadda. Haddii aadan u sheeg, waxay ku baraarujin kartaa inay u maleeyaan inay khiyaano tahay, iyo xannibi doono kaarka. Sidoo kale, weydii haddii aad bankiga leeyahay goobaha caalamiga ah ama iskaashi la degaanka bangiyada Yurub.
Frankfurt illaa tikidhada tareenka Cologne
Tikidhada Brussels iyo Cologne Train tikidhada
Tigidhada Tikidhada ee loo yaqaan 'Vienna to Cologne Tareenka'
Stuttgart illaa tikidhada tareenka Cologne
tip 8: Waxa aad lumiso on bed-ka, aad ku guuleysan on roundabouts ah
Ma aha allabari meesha aad ee kaydka yar hotel. Anaga talinaynaa siinta doorashada si aad Airbnb ama hotel meesha ugu bartamaha marka aad qorshaynayso safarka Europe. safra miisaaniyadda, khaas ahaan, u janjeera in ay doortaan hoteel ku yaal meel ka dhasho in € 5 raqiisan yihiin mid ka mid in badan dhexe. Waxaad arki doonaa badbaadiyo waqtiga iyo lacagta gaadiidka (gaar ahaan haddii aad dabaylaha ilaa tagaasida qaadashada).
Zurich to Basel Train tigidhada
Tigidhada Bern ilaa Basel Tareenka
Geneva ilaa tigidhada tareenka Basel
tip 9: Ha iloobin inaad wacdo side taleefankaaga ka hor intaadan qorsheyneynin safarka Yurub
Wac side marka aad dhameystiran si ay u qorsheeyaan safar Yurub oo heli i qorshef aad qorsheyneysid inaad isticmaasho telefoonka, ka dibna u hubiso in aad dhigay aad telefoonka ah si looga fogaado eedeeyay xogta shil (oo kooban: dami xogta gacanta iyo xaddido tirada apps in isticmaali kartaa xogta gacanta). Oo, sida qorshe, eekaan oo lacag la'aan ah shabakadaha Wi-Fi u duuban iyo diraya emails, hubinta Webka, iyo isticmaalka apps. Europe ayaa goobaha badan wifi, si aadan u noqon doonaa ee soo xiriiri muddo dheer. Haddii kale, iibsato kaarka SIM ah aad telefoon marka aad u hesho in ay Europe.
Rimini illaa tikidhada tareenka ee Milan
Tigidhada Rome illaa Florence Train
Turin ilaa tikidhada Tareenka Milan
Venice ilaa tikidhada Tareenka Milan
tip 10: Waxaa jira App An Waayo Taasi
Eightydays is an awesome travel app that can help you plan a trip to Europe while giving travelers an easy look into the options available when safarka guud ahaan Yurub.
Users bilaabi by gaaray magaalo si ay u bilaabaan iyo kaalinta (hadda, waxaa lagama maarmaan ah si ay u bilaabaan oo ay joojiyaan safarka in meel ka mid ah). Kadib xulo taariikhda bixitaanka, goormaa safar noqon doono iyo sida badan meelaha oo ay ku jiraan. Users sidoo kale dooran kartaa haddii ay doonayaan in ay eegaan magaalooyinka Yurub, Midowga Yurub, ama kaliya aagga Schengen. app ayaa markaas abuuri doonaa faahfaahin ah, buuxiso heerka Airbnb magaalo kasta, kuwa on miisaaniyad.
Waxaa suurtagal ah in ay sii wadaan fursadaha iskushaandheyn ilaa app turunturoodaa dul faahfaahin ah oo eegaya wanaagsan. Oo ha ka welwelina safarka xanibayo: The site says waxaa si gaar ah haramaha baxay garoomada fog-iska and early morning departures that can drain travelers on the road.
Inkasta oo aanay ka (weli) nidaamka qumman tayaasha dhan ah safarka Yurub, Eightydays caawin kara siin safra fikrad fiican dhibcood qiimaha safarka kala duwan, halka laga yaabo inay iyaga soo bandhigid in dalal si aanay hore u leeyihiin loo arkaa.
Socdaalku wuu isticmaali karaa website-ka Eightydays or the newly launched macruufka app to plan their European voyages.
Lyon ilaa Waqtiyada Tareenka London
Amsterdam ilaa Antwerp Train times
Brussels ilaa Frankfurt tareenka waqtiyada
Tikidhada Brussels iyo Mainz Train tikidhada
Dabcan, sida ugu wanaagsan ee socdaalka had iyo jeer waa ay tareenka! Save Tareenku waa habka ugu wanaagsan ee ay u soo iibsadaan tikidhada aad. Haddii adiga kugu saabsan si ay u ballansan yihiin tigidhada tareenka aad guji link https://www.saveatrain.com si ay u helaan dhimis weyn.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit leh link si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fplan-trip-europe%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa fr luqadaha / in ay / ama / de iyo in ka badan.
#bucketlist #HowToGuideEurope europetravel longtrainjourneys talooyin tareenka safarka traveltips